थाहा पाउनुहोस् ! यी ६ कुरा छन् भने तपाई धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ ? – Everest Dainik
थाहा पाउनुहोस् ! यी ६ कुरा छन् भने तपाई धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ ?
१. सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान-सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन-पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्थामा पनि धनको ठूलो साहारा चाहिन्छ । यसर्थ मान-सम्मान, शिक्षा-दीक्षा, परिवारको पालनपोषण, र रोग लाग्दा उपचारको लागि धनको अति आवश्यक हुन्छ ।
महाभारतमा महात्मा विदुरले भनेका छन्, सुन्दर श्रीमती हुनु पनि एक प्रकारको सुख हो । कारण घरमा सुन्दर पत्नी हुनाले तपाईंको ध्यान बाहिर भड्किदैन ।
२. जीवनमा सदैव सुखी रहनको लागि शरीर स्वस्थ हुनु जरुरी छ । यदी शरीरमा कुनै रोग छ भने तपाई राम्रोसँग कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न । यस्तो अवस्थामा तपाईं जीवनका हरेक कुराबाट बञ्चित हुनुहुन्छ । यदि तपाईंमा साना-साना रोगहरु छन् भने पनि तपाईं कुनै काम राम्ररी गर्न सक्नुहुन्न । श्रम नगरी खान पाईंदैन । श्रम गर्नका लागि शरीर स्वस्थ हुनुपर्यो । स्वस्थ शरीर नै एक प्रकारले सुखी जीवन हो, इश्वरको बरदान हो ।
सम्बन्धित् समाचार पाकिस्तानी कलाकार सवा कमरले बलिउडका हस्तिहरुको खिल्ली उडाएपछि ...
३. महाभारतमा महात्मा विदुरले भनेका छन्, सुन्दर श्रीमती हुनु पनि एक प्रकारको सुख हो । कारण घरमा सुन्दर पत्नी हुनाले तपाईंको ध्यान बाहिर भड्किदैन । घरमा श्रीमतीसँग हुने व्यवहारबाट तनाब मुक्त भएपछि तपाइको बाहिरीयासँग सम्बन्ध रहँदैन र अनेकौ समस्याबाट बच्न सक्नु हुन्छ । समयमा घरमा आइन्छ । आपसी छलफल र सदव्यवहारबाट नै घर परिवार संचालन हुन सक्छ ।
कर्कशा श्रीमती हुनेको घरमा न परिवारले सुख पाउँछ न इष्टमित्र आउँछन् न छरछिमेकी, न उनीहरुको सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
४. सुन्दर त्यसपछि पनि मीठो बोल्ने श्रीमती पाउनु भनेको सुनमा सुगन्ध हो । त्यो पनि अर्को सुख हो । जसले नम्रता पूर्वक कुरा गरेर परिवारका हर सदस्यलाई सुख राख्न सक्छिन् । यदी नमीठो बोल्ने श्रीमती घरमा छन भने दिनहू घरमा विवाद भईरहन्छ र घरको वातावरण अशान्त हुन्छ । यसप्रकार कर्कशा श्रीमती हुनेको घरमा न परिवारले सुख पाउँछ न इष्टमित्र आउँछन् न छरछिमेकी, न उनीहरुको सहयोग प्राप्त हुन्छ ।
महात्मा विदुर– भन्छन् सज्जन सन्तान हुने जो कोहीले पनि दुख कहिल्यै भोग्नु पर्दैन ।
५. वर्तमान समयमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सन्तान हो । सन्तान यदी गलत बाटोमा लागे भने यसको दोष बुबा आमालाई पर्न जान्छ । सन्तान विद्वान् हुन भनेको ठूलो सुख हो । त्यसैले सन्तानको उच्च शिक्षाको लागि बाबु–आमाले आप्नो भएभरको सम्पत्ति लगाएर विदेशमा पठाउँछन् । कारण बुढेसकालमा सन्तान एकदम जरुरी हुन्छ । छोरो साथमा भएर पनि कुलतमा लागेको छ भने त्यो भने दुःखको कारण बन्दछ । तसर्थ जसको सन्तान आज्ञाकारी छन् उ सुखी हुन्छ । जसको सन्तान मुर्ख छ कुलतमा लागेको छ उ दुःखी । त्यसैले महात्मा विदुर– भन्छन् सज्जन सन्तान हुने जो कोहीले पनि दुख कहिल्यै भोग्नु पर्दैन ।
यदि तपाईंसँग पैसा छैन तर कला छ भने तपाई त्यसप्रकारका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ । सम्मानपूर्वक जिवनयापन गर्न सक्नु हुन्छ ।
६. पैसा त आउँछ जान्छ यो एक नियम नै हो । कैयौं पटक यस्तो पनि देखिएको छ कि कोही व्यक्ति कुनै दिन धनवान हुन्छ त केही दिनमै पैसाको लागि तड्पिरहेको हुन्छ । कोही मानिस आफ्नो भएको पैतृक सम्पत्ति अनियन्त्रितरुपले खर्च गर्छन । यस्तो स्थितिबाट बच्नको लागि तपाईसँग यस्तो ज्ञान हुनु पर्यो जसले भएको धन नष्ट पनि नहोस् र काम पनि बनोस् । यदि तपाईंसँग पैसा छैन तर कला छ भने तपाई त्यसप्रकारका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ । सम्मानपूर्वक जिवनयापन गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्बन्धित् समाचार किन खेल्दैनन नाना पाटेकर र सञ्जयदत्त सँगै फिल्म ?
ट्याग्स: Beautiful Girl, lucky charms